Kedu ihe kacha mma mmanụ silicone nke anyị na -amaghị?
Kedu ihe kacha mma mmanụ silicone nke anyị na -amaghị? A na -emepụta ọtụtụ ngwaahịa na ndụ site na ngwaahịa kemịkal. Ngwaahịa ndị a na -eji uru ha maka ojiji anyị. Mmanụ Silicone na -ezokarị aka na ngwaahịa polysiloxane kwụ n'ahịrị nke na -ejigide ọnọdụ mmiri n'ime ụlọ ...
Kedu ihe mejupụtara ndị defoamers?
Ọdịmma mmepe nke ndị defoamers organic na ụlọ ọrụ akwụkwọ. Nnyocha ngwa nke ndị ọrụ nọ n'ụwa na-agbanwe site na otu ụdị ọtụtụ ihe gaa n'ụdị nke mejupụtara. Mba dị iche iche gburugburu ụwa ekenyela nnukwu ọrụ nchịkwa mmadụ ...
Kedu ọrụ mmanụ silicone na -arụ n'ụlọ ọrụ ịchọ mma?
Enwere ọtụtụ ngwa mmanụ silicone na ndụ anyị, nke na -egosipụta n'akụkụ anyị niile. Taa, anyị na -ekwukarị maka ọrụ mmanụ silicone na ụlọ ọrụ ntecha. Anyị niile maara na ihe ntecha dị oke ọnụ ugbu a. N'agbanyeghị nke ahụ, ọtụtụ ndị ka na -eji ha eme ihe. Ugbu a ...